पाइल्स रोगी हुनुहुन्छ ? मुला सेवनबाट एक महिनामा ठिक हुन्छ, यस्तो छ खाने तरिका | Rajmarga
पाइल्स रोगी हुनुहुन्छ ? मुला सेवनबाट एक महिनामा ठिक हुन्छ, यस्तो छ खाने तरिका
पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो । तर, यो गलत हो । डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ।
औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु हुन्छ ।
यदि तपाई बजारबाट किनेर केही पनि प्रयोग गर्न चाहनु हुन्न भने मुलाको पातलाई सुकाएर त्यसको चुर्ण बनाएर पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ । एक महिना नियमित सेवन गरेपछि तपाईको मुलाप्रतिको दृष्टि नै परिवर्तन हुनेछ । एजेन्सी
Previous post: सिरियाः साढेको जुधाइ, बाछाको मिचाई, रुस–अमेरिका युद्धको तयारीमा
Next post: यस्तो रहेछ आमा बन्न चाहने महिलाका लागि गज्जबको उपाय